संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानमा पनि खुसी छैनन् कुशाहावासी
सप्तरी । मंसिर २१ गते दोश्रो चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार–प्रसारले यतिवेला सप्तरी जिल्ला तातेको छ । उम्मेदवार तथा दलका नेता÷कार्यकर्ताहरु सभा, भेटघाट तथा घरदैलोमा ब्यस्त छन् ।
सार्वजनिक स्थल, चियाँ पसल, पान पसल लगायतका स्थानमा पनि निर्वाचनकै कुराले प्राथमिक्ता पाउन थालेका छन् । जन–जनमा निर्वाचनको चर्चा छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्चालहरु निर्वाचनमय भएका छन् । पोष्टर, पम्प्लेट, झण्डा ब्यानर लगायतका निर्वाचन प्रचार सामग्रीले चौक वजार रंगिएका छन ।
तर, सप्तरीको हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्वर १४ स्थित कुशहा टोलका वासीन्दाले भने यस्तो माहौलमा पनि खुसी मनाउन सकेका छैनन् ।
संविधान कार्यान्वयको महाअभियान (प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन) ले पनि यहाँका वासिन्दालाई असर गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण हो–गत साउन महिनाको अन्तिम साता आएको विनासकारी वाढि ।
उनीहरुलाई अहिले पनि निर्वाचन भन्दा गाँस, वास र कपासकै चिन्ता छ । ५ महिना वित्न लाग्दा पनि कुशाहाका कतिपय विस्थापित परिवार घर फर्कन सकेका छैनन् । भएको घर वाढिले बगाएपछि नयाँ संरचना तयार गर्नु उनीहरुका लागि ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउनु सरह भएको छ ।
वस्तीलाई सडकसम्म जोड्ने पुल बाढीले बगाएको छ । जसका कारण बस्तीमा सवारी साधान समेत पुग्न नसक्दा करिब चार सय परिवारको जीवनयापन कष्टपुर्ण छ । गर्मीभरी त्रिपाल र अस्थाई टहरामा जीवन निर्वाह गर्दै आएका उनीहरु जाडो सुरु हुनथालेसँगै चिन्ता र पीडामा वाँच्न थालेका छन् ।
सितलहरका कारण सप्तरीमा हरेक वर्ष दर्जनौ मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । वाढिले भएको घरसहित ओढ्ने–ओछ्याउने कपडा र अन्नपात समेत वगाएपछि यो वर्षको जाडो कसरी धान्ने भन्ने चिन्ता हरेक वाढि पीडित परिवारमा देखिन्छ ।
असोज २ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भोट नहाल्ने मनस्थिती वनाएका गाउँलेले आफनै जनप्रतिनिधि जितेर जाने भएपछि मतदान गरे । तर, अपेक्षा अनुसार कुनै पनि काम नभएपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने की नगर्ने भन्ने अन्यौल उनीहरुमा कायमै छ । निर्वाचनमा मतदान गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने कस्लाई मत हाल्ने भन्ने विषयमा पनि कुशाहावासीले खासै सरसल्लाह नगरेको रामविलास यादवले वताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२) अन्तर्गत पर्ने उक्त टोलमा हालसम्म राजनितिक दलका नेता÷कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरुको समेत खासै चहल–पहल देखिएको छैन । वाढि पीडित परिवारको सहज जीवन यापनका लागि राज्य स्तरवाटै केहि योजना नआए मतदानमा भाग लिनुको कुनै अर्थ नरहने पीडित परिवार मध्येकी ववितादेवी मण्डलले वताईन ।
तर, सुरक्षित र स्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने उम्मेदवार आए खुसीखुसी मतदान गर्ने उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आशै आसमा भोट हाल्यौ’ उनले भनिन्–‘तर, यस पटक भने भोट हाल्ने विषयमा सल्लाह गरेरै निर्णय लिने विचार गरेका छौ ।’